Aza mifanabatibaty fa tssss …! | mandimby maharo
Aza mifanabatibaty fa tssss …!
Posted on 9 October 2012 by Mandimby Maharo
Nambara tamin’ny fitsidihana tany Ambatofinandrahana nataon’ny minisitry ny Fanabeazana Manoro Regis omaly 08 oktobra fa niakatra ny isan’ny ankizy niditra an-tsekoly tamin’ity taona ity. Amiko dia fanesoana sy fanaovana ny olona ho adala mihintsy ny fanabarana toy izany. Raha ny iainana sy ny hita dia ny mifanohitra amin’izany no zavamisy. Toa lasa fanesoana ireo zaza maro voatery nijanona amin’ny fianarana satria tsy manana ny ho enti-manana amin’izany ny ray aman-dreniny mihintsy ilay izy. Nambara koa fa nihena ny tahan’ireo mamerina kilasy ary mahatody lavitra amin’ny fianarana bebe kokoa ny zaza malagasy tao anatin’ity tetezamita ity. Valalanina ny saina maheno kabary ataon’ny tompon’andraikitra toy izany.
Na dia ho lazaina fa kabary politika entina andaminana ny sain’ny olona aza izany dia tsapa sy mivandravadra loatra ny tsy mampitombina azy. Ho entina andaminana ny sain’ny olona fotsiny tokoa raha ny fahitana ity lanonana omaly ity. Izay koa no nahatonga ny minisitra naniry mba ho taonan’ny filaminana eo amin’ny tontolon’ny fanabeazana ity taona lty. Teny natsipiny ho an’ireo mpikambana ao amin’ny Sempama moa ity teny ity. Ny Sempama izay vao nanao fanentanana ny amin’ny tsy hiverenan’ny mpampiana an-tsekoly ny herinandro lasa teo. Vitsy nefa aloha ny namaly izay antso nataon’ity sendikà ity raha ny fanombohan’ny taom-pianarana omaly satria tonga namonjy ny asany ny ankamaroan’ireo mpampianatra eny amin’ny sekolim-panjakana eny.
Ho entina itondrana izany fandaminana izany indindra koa angamba no nanaovan ny Joro tany amin’ireo toerana nandalovan’ity minisitra omaly ity. Nanolotra omby iray isak’ireo Tanana nandalovany manko izt mba ho zaraiana amin’ireo ray aman-drenin’ny mpianatra tafavory nihaino ny kabariny. Fomba malagasy manko hono ny mamono omby sy manasina izany mba ho “nofon-kena mitam-pihavanana” eo amin’ny mpiray Tanana sy iray mpiombon’antoka. Ny irina dia mba tsy ho matimaty fahatany iny omby iny ary tsy hivaro-panahy amin’ny fomba isan’karazana fotsiny anie ireo izay nanatrika iny fotoana iny fa mba hitondra vokatra tsara ho an’ny fampianarana eto Madagasikara tokoa izany.
Tags: fampianarana, MadagasikaraCategories: societé